मनिषा र कञ्चनको मृत्यु : हत्या कि आत्महत्या ? – Kumbha Khabar
मनिषा र कञ्चनको मृत्यु : हत्या कि आत्महत्या ?
On २१ बैशाख २०७६, शनिबार १६:१७
सिरहा : एक हप्ता अगाडि सिरहाको कल्याणपुर नगरपालिका–८ की २१ वर्षीया कञ्चन कुमारी मण्डलको जलेर मृत्यु भएको घटना नसेलाउँदै फेरि एक महिलाको रहस्यमै मृत्यु भएको छ । शुक्रबार सिरहा नगरपालिका–१४ खिरौनाकी १९ वर्षीया मनिषा कुमारी मण्डलको ओछ्यानमै मृत अवस्थामा भेटिइन् ।
उनी आफ्नो पति रामनरेश मण्डलसँगै सुतेकी थिइन्। घरमा पति–पत्नीबाहेक सासु तारादेवी मण्डल पनि बस्थिन् । प्रहरीले उनको शव पोस्टमार्टमका लागि जिल्ला अस्पताल सिरहा ल्याएका थिए । मृतक मनिषाका माइतीले उनलाई दाइजोका कारण पति र सासूले घाँटी थिचेर हत्या गरेको आरोप लगाएपछि शुक्रबार दिनभरी पोस्टमार्टम हुन सकेको थिएन । साँझ मनिषाका बुबा रघुनाथ मण्डलले प्रहरीमा किटानी जाहेरी दर्ता गराएपछि उनको पोस्टमार्ट भयो । रघुनाथले मनिषाका पति, सासूसहित चार जनामाथि जाहेरी दर्ता गराएका छन् ।
मृत्यक मनिषाका पति र सासूलाई घटनाको अनुसन्धान गर्न प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको छ । उनीहरुमाथि जाहेरीका आधारमा कर्तव्य ज्यान मुद्दामा म्याद थप गरी अनुसन्धान बढाइने प्रहरी कार्यालयले जनाएको छ । शवको प्रकृति हेर्दा तत्कालै हत्या कि आत्महत्या भन्न सकिने अवस्था नरहेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय सिरहाका प्रवक्ता तथा डिएसपी माधवराज खरेलको भनाई छ । पोस्टमार्टम रिपोर्टपछि हत्या वा आत्महत्याबारे खुल्ने उनले बताए ।
मनिषाको माइती गोलबजार नगरपालिका–८ह हो । हत्या नै गरिएको माइती पक्षको दाबी छ । ‘बिहीबार साँझ छोरीसँग कुरा गराइदिनु भन्दा ज्वाँइले छोरी सुतिरहेको जवाफ दिएका थिए,’ मृतक मनिषाका बुबा रघुनाथले भने,‘त्यसको केही मिनेटमै मृत्यु भएको खबर आयो । उनको हत्या भएको छ ।’ घटनाको अनुसन्धान गरी दोषीमाथि कारवाही हुनुपर्ने उनले माग गरे ।
सामाजिक परम्पराअनुसार गएको फाल्गुन १६ गते मनिषा र रामनरेशको विहे भएको थियो । विहेमा कबुल गरेअनुसार मोटरसाइकल, एक तोला सुन र डेढ लाख नगद दिएको रघुनाथले सुनाए । ‘विहेमा दाइजो, भोजभतेर र सरसमानमा ९ लाख भन्दा बढी रकम खर्च भयो । ऋण लाग्यो । जग्गा बेचेर ऋण तिरेँ,’ उनले भने । रघुनाथ दुई वर्ष वैदेशिक रोजगारीमा गएर छुट्टीमा घर फर्केका थिए । छोरीको विहे चाडै गर्नुपर्छ भन्ने दबाबले ऋण खोजेर विहे गरेको बताए ।
यस्तै, गएको बैशाख १२ गते कल्याणपुर नगरपालिका–८ अरङ्गका २१ वर्षीया कञ्चन कुमारी मण्डल जलेर घाइते भएकी थिइन् । उनको उपचारका क्रममा बैशाख १३ गते काठमाडौंमा मृत्यु भयो । कञ्चनले घाइते अवस्थामै प्रहरीसमक्ष पति बेचु मण्डल र सासू सुरजी मण्डलले मट्टीतेल खन्याएर आगो लगाइदिएको ब्यान दिएकी थिइन्। सुरजीलाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ भने बेचु फरार छन् ।
स्थानीयबासीले भने कञ्चनको घटनालाई हत्या नभएर आत्महत्या भन्ने दाबी गर्दै आएका छन् । उनीहरुकाअनुसार कञ्चन जलिरहेको अवस्थामा उनकी सासू खेतमा काम गर्न र पति बेचु भारतको अहमदावाद थिए । बेचु ६ महिना पहिला नै रोजगारीका लागि भारत गएका थिए। पीडितको अन्तिम बयानका आधारमा कतव्र्य ज्यान मुद्दामा सुरजीलाई म्याद थप गरी अनुसन्धान भइरहेको सिरहा प्रहरी प्रवक्ता तथा डिएसपी खरेलले जानकारी दिएका छन् । उनका पति बेचुको खोजी भइरहेको उनले बताए ।
दुवै घटनालाई अनुसन्धानपछि मात्रै हत्या कि आत्महत्या भन्न सकिने डिएसपी खरेलको भनाई छ ।